ZBN nitrogen generator - China Hangzhou Poly Air Comment Izixhobo
Umgaqo loxinzelelo PSA swing adsorption umatshini wokwenza nitrogen Hangzhou Poly izixhobo okohlukahlukana moya lemveliso Co., Ltd. isekelwe kumgaqo wengcinezelo swing adsorption, esebenzisa carbon kwizinga eliphezulu Imfono yokugalela ngemolekyula njengento adsorbent, phantsi koxinzelelo ethile, imveliso nitrogen emoyeni. Emva ucoco umoya owomileyo zixinaniswe, uxinzelelo adsorption kunye desorption kwi cleaner adsorber. Ngenxa isiphumo ashukimisayo, kwe- izinga ioksijini le carbon sie eziphilayo ...
Umgaqo loxinzelelo PSA Umatshini swing adsorption wokwenza nitrogen
Hangzhou Poly izixhobo okohlukahlukana moya lemveliso Co., Ltd. isekelwe kumgaqo wengcinezelo swing adsorption, esebenzisa carbon kwizinga eliphezulu Imfono yokugalela ngemolekyula njengento adsorbent, phantsi koxinzelelo ethile, imveliso nitrogen emoyeni. Emva ucoco umoya owomileyo zixinaniswe, uxinzelelo adsorption kunye desorption kwi cleaner adsorber. Ngenxa isiphumo ashukimisayo, izinga kwe- ioksijini le carbon yokugalela molekyuli inkulu kakhulu kunalowo nitrogen, kwaye mpilo preferentially adsorbed yi le carbon yokugalela eziphilayo, ne-nitrogen is ahlanganiswe kwisigaba igesi. Kwaye ngoko ke xi lancitshiswa kwingcinezelo yesiqhelo, kwaye adsorbent saqhotyoshelwa ioksijini kunye nezinye ukungcola. Useto jikelele kwinkqubo ezinde ezimbini adsorption, omnye inqaba umthamo nitrogen adsorption, ezinye okutsha Tower desorption, ngokusebenzisa i-PLC inkqubo isilawuli ukulawula igesi valve ukuvula nokuvala, ukwenzela ukuba umjikelo ezinde ezimbini, ukuze kuphunyezwe imveliso oqhubekayo iinjongo ezikumgangatho ophezulu nitrogen. Le nkqubo ibandakanya ezi zixhobo zilandelayo: mnqongo zixinaniswe umoya zokwenza nyulu, itanki yokugcina umoya, isixhobo ioksijini nitrogen ngokwahlukana, itanki buffer nitrogen.
1, amacandelo zokuhlanjululwa umoya zixinaniswe
Le isiguquli ukunika kuqala ngomoya Kwathi elabelwa izifundo umoya zokuhlanjululwa zixinaniswe, umoya zixinaniswe ukusuka kumbhobho lokucoca ukususa inkoliso ioli, amanzi, uthuli, lo ngumkhenkce wokomisa ukongeza ngakumbi amanzi, neoli entle filter, uthuli, yaye ilandelwe yi kwi filter ngobuciko ultra zokuhlanjululwa enzulu. Ngokutsho kwinkqubo imeko, inkqubo ukungcola umoya zezulu ilungiselelwe iseti isixhobo oyile umoya kokususa, nto leyo isetyenziselwa ukuthintela amathuba micro oyile umthondo, ukhuseleko olwaneleyo ukuze carbon yokugalela eziphilayo. uyilo okungqongqo kwezakhi air zokuhlanjululwa ukuqinisekisa ubomi inkonzo carbon yokugalela eziphilayo. Emva kokuba baphathwa licandelo, umoya ococekileyo ingasetyenziselwa umoya isixhobo.
22, itanki yokugcina umoya
Itanki umoya kukunciphisa pulsation flow, eziphahle; ngokwenjenjalo kunciphiseke kukuhla kunyuka xi kwinkqubo, ukuze umoya ukwazi kakuhle ngokwala umoya zokuhlanjululwa zixinaniswe, ukuze ususe ngokupheleleyo ubumdaka emanzini, ukunciphisa PSA oxygen unit nitrogen ngokwahlukana umthwalo elandelayo. Kwangaxeshanye, kwinqaba yokufunxa ukuswitsha, ubonelela kwakhona ixesha elifutshane ngokukhawuleza kunyuswe inani elikhulu umoya ukwazi ukuba PSA oxygen isixhobo nitrogen ngokwahlukana, lo adsorption xi kwinqaba ngokukhawuleza ukuze unkcenkceshele uxinzelelo lomsebenzi, ukuqinisekisa izixhobo oluthembekileyo kunye nokusebenza izinzile.
3, ioksijini kunye nitrogen isixhobo ngokwahlukana
Le adsorption ithawa icarbon ezizodwa yokugalela molekyuli ngu A and B Xa umoya ococekileyo zixinaniswe engena ugwebu A kwinqaba aqukuqela carbon yokugalela zofuzo ukuze ekupheleni iplagi O2, CO2 kunye H2O ke adsorbed, kwaye igesi nitrogen eEdeni ukusuka ekupheleni yokuphuma kwenqaba adsorption. Emva kwexesha elithile, icarbon molekyuli yokugalela adsorption tower A. Ngelo xesha, Ingxonde yokumisa oluzenzekelayo adsorption, zixinaniswe umoya flow kwinqaba B wemveliso oksijini nitrogen, kunye Inqaba molekyuli yokugalela ngokutsha. Nokuhlaziya ngokutsa sefu lwalusanda iqaphelwa ekuhleni ngokukhawuleza kwinqaba adsorption ukuya womoya ukususa i adsorbed O2, CO2 kunye H2O. imiqolo ezimbini khosi adsorbed kwaye neenkcukacha zeposi ukugqibezela ukwahlulwa oksijini ne-nitrogen, kwaye imveliso rhoqo-nitrogen. Le nkqubo ingentla ilawulwa yi eli logic ofakwe (PLC). Xa ekupheleni yokuphuma ekuhlambululeni yenani ubungakanani nitrogen, inkqubo PLC, oluzenzekelayo ofaka ivelufa livulekile, i angakufanelekeli oluzenzekelayo nitrogen yokulahla, ukuqinisekisa ukuba irhasi nitrogen ezingenachaphaza akuthethi iqukuqele. Le ofaka gas xa usebenzisa ingxolo injini muffler lingaphantsi kwe 75dBA.
4, itanki nitrogen buffer
I-nitrogen itanki buffer osetyenziswa wokulungelelanisa uxinzelelo nokucoceka ye-nitrogen wahluliwe kwinkqubo oxygen ukungcola nitrogen ukuqinisekisa ubonelelo rhoqo nitrogen izinzile. Kwangaxeshanye, kwinqaba yokufunxa ukuswitsha, kube ngokwawo iingxenye ze gesi ukungakuhlawulisi adsorption inqaba, ukufakwa nenqaba isandla usizo kuqinise, kodwa kwakhona ukudlala indima ekukhuseleni ebhedini, kudlala indima ebaluleke kakhulu kwinkqubo izixhobo abangabancedani kule nkqubo emsebenzini.
index Technical bomashini yokwenza nitrogen:
Umbethe ngongoma: ngaphantsi kwe -40 amaqo C: uxinzelelo adjustable lingaphantsi 0.6Mpa
iimpawu Technical bomashini yokwenza nitrogen
1 amacandelo afanelekileyo yangaphakathi, ukusasazwa umoya efanayo, ukunciphisa ifuthe ngesantya esiphezulu zezulu.
2 ukuphucula uyilo inkqubo, ukusetyenziswa iziphumo ezingcono.
3 amanyathelo yokhuseleko yokugalela ekhethekileyo zofuzo ukuze bandise ubomi carbon yokugalela eziphilayo.
4 izixhobo onengqondo gas nitrogen angakufanelekeli ahlanganiswa ukuqinisekisa umgangatho imveliso.
5 ozikhethelayo isantya sokuqukuqela nitrogen, inkqubo yolawulo oluzenzekelayo, inkqubo elawulwa-kude.
6 Kulula ukusebenza, intsebenziswano ezinzileyo, iqondo eliphezulu esizisebenzelayo, onokufikelela ukusebenza yaqonda.
Ububanzi isicelo bomashini yokwenza nitrogen:
Metal inkqubo unyango ngexa irhasi yokhuselo, igesi nitrogen kunye neendidi ezahlukeneyo lamatanki, ishishini iikhemikhali zokuhlanjululwa igesi yombhobho, irabha, iimveliso zeplastiki mveliso, ukutya kushishino zeemoto ioksijini amatsha-ukugcina ukupakisha, ishishini neziselo ugqume zokuhlanjululwa negesi, amayeza kushishino nitrogen nitrogen icala ukuphakheja kunye exhaust isikhongozelo ioksijini, amacandelo elektroniki kunye nemveliso electronic inkqubo kushishino semiconductor negesi olukhuselayo. Enyulu, nokuphuma kwemali kunye noxinzelelo ukuze zilungiselele ukuhlangabeza iimfuno zabathengi ezahlukeneyo.
Isikhongozelo Natural Gas Generator
Luhlala Oxygen Generator
Gas Generator yeziTyalo
Nitrogen Generator nitrogen Plant Gas
Producer Gas Injini Generator